Portal:Cunto - Gpedia, Your Encyclopedia
C U N T O
Boortal khaas u ah cuntada
Cuntada iyo Raashinka
Cunto (sidoo kale loo yaqaano Raashin) waa wax kasta oo la quuto si looga helo nafaqo iyo awood jidhka nooluhu u baahan yahay. Cuntadu waa walax nooluhu quutaan taasi oo unugyada jidhka siisa tamar ay ku shaqeeyaan. Sida caadiga ah cuntada waxaa laga helaa dhirta iyo xayawaanka; waxayna ka kooban tahay nafaqo: dux (baruur), borotiin, fiitamiin, macdano iyo noocyo kale oo nafaqo ah kuwaasi oo taageera isla markaana tamar uu ku socdo siiya xubnaha jidhka. Walxaha cuntada waxa inta ugu badan laga qaataa afka waxayna tegtaa caloosha halkaasi oo unugyada jidhku u sii kala jebiyaan walxo yaryar, isla markaana loo isticmaalo awood ahaan, si noloshu u sii jirto.
Halkan riix qoraal faahfaahsan: Cunto ...
Laxoox (sidoo kale loo yaqaano Kimis) waa cunto laga sameeyo daqiiq, biyo iyo milix la qasay ka dibna la dubey. Loxooxdu waa raashin ka mid ah canjeerada taasi oo laga cuno deegaanda Jabuuti, Soomaaliya, iyo Yemen. Sidoo kale, loxooxda waxaa laga cunaa wadanka Israaiil, halkaasi ooy geeyeen Yuhuuda ka qaxday wadanka Yaman. Loxooxdu waxay la mid tahay canjeerada cuntada Soomaalida, waxay kaga duwan tahay loxooxdu ma lahan khamiir badan sida canjeerada.
Deegaanada Waqooyiga Soomaaliya iyo Jabuuti, loxooxdu waxay ka mid tahay qureeca dadka ee maalin kasta. Sido kale loxooxda waxaa lagu daraa suugo, subag, shaah, bun iyo saliid macsar. Dhinaca kale, loxooxda waxaa laga isticmaala wadanka Yamanta, halkaasi oo lagu iibiyo wadooyinka dhamaan magaalooyinka wadankaasi.
Maqaalo kale oo la doortay... Sii akhri...
Ma ogtahay in...
Bariiska, qamadiga iyo galleydu yihiin cuntada ugu badan ee laga cuno caalamka, kuwaasi oo u dhigm 61% Cuntada Aduunka.
Kaluunku leeyahay borotiin aad u badan. Dunida maanta waxaa jira beero lagu dhaqo kaluunka ay dadku quutaan.
Cunitaanka ukunta ee maalin kasta keento xanuunka macaanka "sonkorow".
Qassabku yahay dhirta ugu badan ee loo beerto ganacsi.
Quraaca aroortii tahay cuntada ugu muhiimsan maalinta.
Halbeega cuntada loo yaqaano Kallari.
Inaad noolaan karto wakhti dhan todobaad (7 cisho) cunto la'aan.
Baasto waa cunto caan ah
salad buuxda oo noocyo badan oo khudaar ah ku jiraan.
Khudaar (Af carabi: خضار Af-Taliyaani: verdura Af Ingiriis : vegetable) waa midho ka baxa dhirta kuwaas oo lagu darsado cuntada. Khudaartu way ka duwan tahay midhaha, sababtoo ah midhuhu waa cunto bisil oo in la kariyo u baahnayn, laakiin inta u badan khudaarta waa in la kariyo ka hor intaan la cunin. Khudaarta maalin walba dadku isticmaalaan waxaa ka mid ah: basasha, tamaandhada, barandhaha, saladhka, toonta, kaarootka, besbaaska, iyo kuwo kale oo badan.
Midhaha firileeyda ah ee yaryar, sida bariiska iyo qamadiga lama odhan karo waa khudaar, sababtoo ah waxaa loo yaqaanaa firileey.
Noocyo kala duwan oo hilib ah
Hilib(Af Ingiriis : meat; Af carabi: لحم) waa jiidhka xayawaanka kaasi oo dadku u quutaan cunto ahaan. Sida caadiga ah, aadamuhu (dadka) waa gebi-quute (Saynis ahaan omnivorous), taasi micnaheedu waa in dadku quutaan hilibka iyo caanaha xayawaanka iyo dhamaan kheyraadka dhirta.
Tan ilaa iyo kumanaan sano ka hor dadku waxay ku tiirsanaayeen hilibka xayawaanka iyo midhaha dhirta ayagoo isticmaali jirey Ugaadhsi iyo Qadhaabsi. Si kastaba ha ahaatee, horaantii ilbaxnimada aadamaha ayaa dadku bilaabeen ineey dhaqdaan xoolo si loo manaafacaadsado kheyraadkooda. Hilibku wuxuu ka kooban yahay biyo, borotiin, iyo dux waana cunto aad ugu muhiim ah jidhka iyo caafimaadka dadka.
Hilibka waxaa laga helaa xayawaanka. Hilibka waxoo ka sameysanyahay, murqo,ama seed, iyo subak. Hilibka waxoo leeyahay brotiin, aad u badan oona muhiim u ah, korka ama jirdhiska bini aadanka. Hilibaha la cuno wee kala duwan yihiin. Hilibka soomaalida cunto, waxaa ka mid ah, hilbaha xalaasha ah, sida Hilibka Lo'da, Geelka,adhiga, Idada, Malaayga,doorada iyo Sagaarada.Dadka aduunka ku nool waxaa saaid uugu ah Hilbaha ee cunaan, sida Hilibka Doofaarka, Eyga, Fardaha, yaanyuurta,Dooliga,Masaska,iyo Caaro caaro. Iyo wax badan oo la tiri karin.
Maqaallo La Doonayo
Cunto Soomaali (Af Ingiriis : Somali cuisine; Af carabi: مطبخ صومالي) waa cuntada ay caanka ku yihiin dadka Soomaalida meel kasta ooy aduunka kaga nool yihiin. Cunto Soomaaliga waxaa ka id ah cuntada hido iyo dhaqanka, casuumadaha, cuntada maalin kasta la isticmaalo iyo dhamaan raashinka dadka Soomaalidu isticmaalaan sida hilibka, sukhaarka, bariiska, baastada, garowga, heeda iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa cunto Soomaaliga ka mid ah habka iyo qaabka dadka Soomaalida u diyaariyaan (kariyaan) cuntada, iyo noocyada u khaaska ah dadka Soomaalida.
Guud ahaan, shacabka caalamka waxaa caado u ah in dhaqanka, luuqada, iyo aqoonta la kala amaahdo. Sidaas darteed waxaa jira waxyaabo badan oo dadka Soomaalida ah ka soo amaahdeen wadanada jaarka ah, noocyo Soomaalidu aliftey, iyo waxyaabo khaas u ah bulshada Soomaalida. Cuntooyinka Soomaalidu ku caanka tahay waxaa ka mid ah canjeerada/laxooxda, sambuus, xalwo, sabaayada, malawaxa, qureebaad, canbuulada iyo sukhaarka.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Cunto&oldid=169684"